कागजात भित्र फाँट सामग्री लुकाउछ. फाँट कागजात भित्र एउटा खरानी रङको चिनोको रूपमा घुस्दछ। यो विकल्प "चल सेट" र "प्रयोगकर्ता फाँट" फाँट प्रकारहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ.
प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँट थप गर्नुहोस् चयन सूचीका लागि.
छनोट सूचीबाट प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँट हटाउछ। तपाईँंले हालको कागजातमा प्रयोग नभएका फाँटहरू मात्र हटाउन सक्नुहुन्छ। सूचीबाट हालको कागजातमा प्रयोग भएको एउटा फाँट हटाउनलाई, पहिले कागजातमा सबै दृष्टान्तहरू मेट्नुहोस् र त्यसपछी यसलाई सूचीबाट हटाउनुहोस्।